September 26, 2018 Amrit sunar0
तपाइँलाई केही प्रश्नको जवाफ थाहा छैन वा कुनै द्विविधा छ वा कुनै विषयको बारेमा तपाइँलाई धेरै जानकारी चाहिएको छ भने के गर्नुहुन्छ ? धेरैको जवाफ हुन्छः गुगल गर्छु । गुगल अहिले हाम्रो दैनिक जिवनीको हिस्सा बनिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले गुगललाई आफ्नो साथी तथा शिक्षक भन्दछन् । गुगल यहीँ हप्ता २० वर्षको भएको छ । […]
September 25, 2018 Subas B.K0
एजेन्सी – गएराती लन्डनमा आयोजित एक समारोहमा फिफाले उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्यो । फिफाले वर्षेनी विभिन्न विधामा उत्कृष्ट रहने गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यक्तित्वलाई फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्डबाट सम्मानित गर्ने गरेको छ । कसले के के उपाधि जिते त ? मोड्रीचलाई फिफाको ‘द बेस्ट’ उपाधि फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्ड रियल म्याड्रिड तथा क्रोएसियाका […]
September 21, 2018 Rijan Bhujel0
च्याम्पियन्स लिग : लिभरपुल र बार्सिलोना बिजयी
September 19, 2018 September 19, 2018 Subas B.K0
गएराति च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गतको उद्घाटन खेलमा लिओनल मेस्सीको ह्याट्रिकसँगै बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगमा डच च्याम्पियन पीएसभी इन्डोभानलाई हराएको छ । समूह चरणको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाले पीएसभीलाई ४–० गोल अन्तरले हराएको हो । घरेलु मैदान नाउक्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले ३१ औं मिनेटमा मेस्सीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । कप्तान मेस्सीले फ्रि किकमा गोल गरेका हुन् । बाँकी […]
मिर्गौलामा पत्थरी कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ? कति खतरनाक हुन्छ ?
September 18, 2018 September 18, 2018 Amrit sunar0
मिर्गौलामा हुने पत्थरी आम समस्याको रुपमा देखापर्दैछ । दैनिक पत्थरीको समस्या बाकेर अस्पताल धाउनेको संख्या निकै ठूलो छ । विशेषगरी अव्यवस्थित जीवनशैली र खानामा असन्तुलनको कारण यस्तो समस्या हुन्छ । महिलाको तुलनामा पुरुषमा पत्थरीको समस्या बढी हुने गर्छ । उसो भए मिर्गौलामा पत्थरी कति हानिकारक छ त ? कसलाई हुन्छ पत्थरी – मिर्गौलामा पत्थरी हुनुका […]
September 17, 2018 Amrit sunar0
आफ्ना बच्चाको उमेर अनुसारको तौल र उचाइ कम हुँदा हरेक आमाबाबु चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो । बच्चाको उमेर अनुसार तौल र उचाइ निकै कम हुनु वा उमेर अनुसार वृद्धि नहुनु राम्रो लक्षण होइन । तौल र उचाइ बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि आमाबुबाले विशेष जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ […]
बंगलादेशमा सम्पन्न १२ औं संस्करणको दक्षिण एसियाली राष्ट्रको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप “साफ सुजुकी कप” को उपाधि माल्दिभ्सले जितेको छ । बंगलादेशको ढाकामा रहेको बंगबन्धु रंगशालामा ६ पटकको उपाधि विजेता तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै माल्दिभ्सले दोस्रो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको हो । साफ च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भारतले […]
September 13, 2018 Subas B.K0
तपाईं हामीले दैनिक कैयन् वेबसाइट लग अन गर्छौं होला । कतिपय जानकारीमूलक त कतिपय मनोरन्जनात्मक वेबसाइट धेरैपटक हेर्छौं । इन्टरनेटको दुनियामा करोडौं वेबसाइट छन् । त्यसैले धेरैको बारेमा हामीलाई थाहै हुँदैन । अझ कतिपय निकै उपयोगी तथा हेर्नैपर्ने वेबसाइटको बारेमा पनि हामीलाई थाहा भैरहेको हुँदैन । यस्तै १० वेबसाइट जसका बारेमा हामी कमैलाई थाहा होला, […]
September 10, 2018 Subas B.K0
समाजका दाजुभाईहरु आपसमा एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहरु हुन्छ भन्ने मुल मर्म सहित सुरुवात भएको पोखरेली ख्रीष्टिय समुदाय आज गण्डकी प्रदेशमा मात्र होइन तर नेपालको एक उदाहरणीय समुदाय बन्दै समाजमा नुन र ज्योति बन्ने कार्य गर्दै अगाडी बढिरहेको छ । समुदायको आज २३ औं साधारण सभा तथा अधिवेशन नदिपुरमा सम्पन्न भयो । सम्पन्न भेलाले […]
September 8, 2018 Rijan Bhujel0
September 7, 2018 Subas B.K0
बंगलादेशमा जारी साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले पहिलो जित निकालेको छ । समूह ए को आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गरेको छ । बंगलादेशको बंगबन्धु राष्ट्रिय रंगशालामा नेपालले भुटानलाई हराएसँगै नेपालले प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना पनि कायमै राखेको छ । पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग २–१ गोलले स्तब्ध भएको थियो । भुटानबिरुद्धको खेलमा नेपालका […]
September 6, 2018 Subas B.K0
ढाका – बंगलादेशमा भैरहेको साफ च्याम्पियनसिप (साफ सुजिकी कप) मा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपाल र भुटानबीचको खेल ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा नेपाली समयअनुसार दिउसो ३ः४५ बजेपछि शुरु हुनेछ । नेपाल पाकिस्तानसँग अन्तिम समयमा गोल खादै २–१ ले पराजित भएको थियो । यस्तोमा नेपाल पहिलो जितका खोजीमा हुनेछ । जारी साफ च्याम्पियनसिपमा रहिरहन नेपाललाई […]
September 5, 2018 Subas B.K0
पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा पुरस्कृत हुने उत्कृष्ट विद्यालयको नाम बुधबार सार्वजनीक गरेको छ जसमा पोखराका तीन विद्यालय नेपाल मै उत्कृष्ट विद्यालय भएका छन् । उत्कृष्टमा पोखराका सामुदायीक तर्फ अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय, शितलादेवी सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत तर्फ मदरल्याण्ड माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट […]